Budata APK maka Android
Ngwa ExpressVPN so na ngwa VPN nke ndị chọrọ ịnweta ịntanetị na -akparaghị ókè ma nwee nchekwa na -eji ekwentị gam akporo gam akporo ha. Agbanyeghị na ọ na-enye ojiji nefu maka naanị otu ụbọchị, mgbe otu ụbọchị gachara, ị nwere ike zụta oge ikpe ụbọchị iri atọ maka ụgwọ, ma ọ bụrụ na afọ ejughị gị na ngwa noge oge nnwale a, ị nwere ike...
GBWhatsapp (APK) bụ ngwa efu na -enye atụmatụ nke ngwa nkwukọrịta WhatsApp, nke dochie SMS, anaghị. Ọ nwere njirimara niile anyị chọrọ ịhụ na ngwa WhatsApp nke gọọmentị, dị ka iji ọtụtụ akaụntụ WhatsApp notu ekwentị, mechie ụbọchị ikpeazụ a hụrụ, ihichapụ ozi, ịgbatị oge vidiyo, mkpọchi ozi, izo akara akọrọ na -acha anụnụ anụnụ, gbanyụọ...
Bus Simulator: Ultimate bụ bọs ịme anwansị egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gam akporo gị. Bus Simulator egwuregwu, site na ndị na-eme Truck Simulator 2018 Europe egwuregwu, na-enye gị ahụmịhe nke ịkwọ ụgbọ ala netiti obodo. Ekwadoro m ya ma ọ bụrụ na ị na-achọ simulator ụgbọ ala. Ọ bụ nefu ibudata ma kpọọ, na...
Garena ROV bụ egwuregwu dị nịntanetị na-eme MOBA dị egwu ebe ndị egwuregwu nwere ike ịlụso ibe ha ọgụ 5v5, 3v3 na 1v1. Ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ zuru oke maka onye ọkpụkpọ ọ bụla ma melite nkà gị. Ntuzi ziri ezi, nkeji na maapụ dị iche iche, yana eserese mara mma ga-amasị ndị niile na-akwado ya. Lụọ ọgụ ma merie, chọta nnukwu ụzọ ọhụrụ na...
Ugbo Simulator 18 bụ ihe ngosi ugbo kachasị mma ị nwere ike igwu na ekwentị gam akporo gị. Nime Simulator Farming ọhụrụ, nke ejiri eserese dị nkọ mara ya, egwuregwu dị adị na ọdịnaya dị netiti egwuregwu ịme anwansị ugbo nelu ikpo okwu mkpanaka, anyị na -ahụ na ọnụ ọgụgụ ihe ọkụkụ anyị nwere ike ịnakọta na iwe ihe ubi abawanyela, yana...
Truck Simulator 2018: Europe, mmepụta ụlọ, kpamkpam nasụsụ English, ọ bụghị naanị gam akporo; Egwuregwu simulator kacha mma nelu ikpo okwu mkpanaka. Ụgbọ ala eletrik nke ọgbọ ọhụrụ kacha mma netiti egwuregwu gwongworo mkpanaka nwere ezigbo okporo ụzọ, ihu igwe dị adị, okporo ụzọ dị iche iche, maapụ zuru ezu na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ. Ọ bụ...
Ugbo Simulator 20 bụ otu nime ihe ndị kasị chọrọ gam akporo egwuregwu na ngwa. Farming Simulator 20 APK siri ike ịhụ nenweghị aghụghọ dị ka a tọhapụrụ ya na Google Play dịka akwụ ụgwọ ya na Farming Simulator 20 APK downloads are modded, not very dependent versions. Cannwere ike ibudata egwuregwu ahụ na Google Play nenweghị nsogbu site na...
Trash Truck Simulator bụ ịme anwansị ụgbọ ala nke ị nwere ike iji na sistemụ arụmọrụ gam akporo rụọ na ekwentị mkpanaaka gị. Ị na -egosi nkà ịnya ụgbọ ala gị negwuregwu ebe ị na -agbalị ịga nihu netiti obodo na nokporo ụzọ dị warara. Trash Truck Simulator, ịme anwansị na -anya ụgbọ ala nwere eserese dị elu, bụ egwuregwu ebe ị na -anwa...
Minibus Simulator 2017 bụ egwuregwu minibus ị nwere ike ịmasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ahụmịhe ịnya ụgbọ ala nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka gị. Anyị na -anwa ịkpata ego site na iji nkà ịnya ụgbọ ala anyị na Minibus Simulator 2017, egwuregwu minibus ị nwere ike ibudata ma kpọọ na ekwentị gị na mbadamba gị site na iji sistemụ arụmọrụ gam...
Dream League Soccer bụ otu egwuregwu bọọlụ kacha ebudata ma kpọọ na ekwentị. Dream League Soccer bụ otu egwuregwu bọọlụ mkpanaka emelitere mgbe emepere ọhụrụ. Yabụ, enwere ike ibudata Dream League Soccer 2019 na ekwentị gam akporo dị ka APK. Ị nwere ike kpọọ oge 2019 - 2020 na ekwentị gam akporo gị site na ịpị bọtịnụ nbudata Dream League...
Taxi Simulator 2018 bụ egwuregwu simulator kacha mma ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gam akporo gị. Mmepụta, nke dị elu karịa egwuregwu ịme anwansị tagzi ọzọ na eserese na egwuregwu, Zuuks Games mepụtara, nke anyị maara na Truck Simulator 2017 na egwuregwu ịnya ụgbọ ala. Anyị nwere ike ịnya tagzi 8 dị iche iche na egwuregwu...
Jikere iji nweta ahụmịhe ịnya ụgbọ ala na Bus Simulator 3D, nke pụtara dị ka egwuregwu na -atọ ụtọ nke ndị ọrụ nwere mmasị na egwuregwu ịme anwansị ga -enwe. Nime egwuregwu na -eme ka ọ dị gị ka ị na -agagharị nokporo ụzọ, akụkụ dị iche iche nke ụgbọ ala gị mebiri ma ọ bụrụ na itinye aka na ihe ọghọm ọ bụla. Ọ bụ eziokwu a na -apụghị...
Ị na -arụzigharị ubi gị site na idozi egwuregwu mgbagwoju anya negwuregwu ihunanya Merge Manor: Sunny House. Jikota Manor: Anwụ na -acha Download Nyere Sunny aka iweghachi ubi nne nne ya na ebube mbụ ya ma kwekọọ na ifuru ka ọ nwee ọganihu. Banye nime akụkọ ịhụnanya nke juputara na ntụgharị ka ị na -emekọ ọnụ na ọtụtụ agwa mara mma dị...
Ihe owuwu simulator 2 bụ ịme anwansị ụlọ nke ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji igwe dị iche iche dị arọ dị ka igwu ala na dozers. Na Simulator Construction 2, egwuregwu ịme anwansị nke ị nwere ike igwu na ekwentị gị na mbadamba site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, enyere anyị ohere isi ụlọ ọrụ ihe owuwu nke anyị....
Transcriber bụ ngwa gam akporo efu nke ị nwere ike iji nyefee ozi olu WhatsApp/ndekọ ụda ekesara gị. Ọ bụrụ na ịnụrụ mkparịta ụka ogologo oge nke ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ gị na WhatsApp na-agwụ ike, ị kwesịrị ịnwale ngwa Transcriber, nke nwere ike ịtụgharị ozi olu ka ọ bụrụ ozi ederede. Etu esi atụgharị ozi olu WhatsApp WhatsApp...
Ultimate Car Driving Simulator bụ egwuregwu ịme anwansị ụgbọ ala nwere eserese kacha mma ọ bụghị naanị na gam akporo, kamakwa na ekwentị. Ị nwere ike ịgagharị nobodo ahụ nefu dị ka egwuregwu ịgba ọsọ Mkpa Maka Ọsọ, ị nwekwara ike isonye na agbụrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Igwe eji akwọ ụgbọ ala kacha mma na mkpanaka nwere ezigbo physics na...
TapTap (APK) bụ ụlọ ahịa ngwa China nke ị nwere ike iji dị ka ihe ọzọ na Storelọ Ahịa Google Play. Ịnwere ike ibudata egwuregwu gam akporo mara mma dị ka PUBG, nke adịghị na ụlọ ahịa Google Play, site na ngwa a wee kpọọ na -echeghị. Nakụkụ gam akporo, enwere ọtụtụ ụlọ ahịa na nhọrọ APK ebe ị nwere ike ibudata ngwa na egwuregwu na...
Driving Academy Simulator 3D bụ egwuregwu dị mkpa maka ndị chọrọ ịmụta ịnya ụgbọ ala. Ekele dịrị Simulator 3D Driving Academy, nke ị nwere ike ibudata nefu na nyiwe gam akporo, ị nwere ike mụta ka esi anya ụgbọ ala nobodo na nnukwu okporo ụzọ. Onye ọ bụla chọrọ ịnya ụgbọ ala, mana ịnya ụgbọ ala anaghị adị mfe. Ewezuga ihe ọmụma nka gị,...
Alaeze nke ndị Pirates bụ egwuregwu rpg ịme anwansị nke pirati. Zụọ ụgbọ mmiri ndị ohi mmiri nke ndị dike ụwa wee banye njem ebube nke mmeri. Download Alaeze ndi ohi Banye na njem mmiri na -emikpu onwe gị, mikpuo noké osimiri dị omimi, wuo ebe nche dị ike ma chọpụta agwaetiti ndị a na -amaghị. Jikwaa ụdị ihe omume niile a na -atụghị...
Tactical Battle Simulator, nke e mere dị iche karịa egwuregwu agha nkịtị, na -adọta uche dị ka egwuregwu ịme anwansị pụrụ iche. Agha ịkpa oke nke ejiri atụmatụ aghụghọ mee atụmatụ na -echere gị. Nime egwuregwu a, ebe enwere nkeji 80 dị iche iche, ị nwere ike bido agha site na ịhọrọ ndị agha ịchọrọ. Otu ọ bụla nwere atụmatụ na...
SuperVPN Onye ahịa VPN efu bụ ngwa VPN nefu maka gam akporo. SuperVPN, mmemme VPN a na -enye naanị ndị ọrụ ekwentị gam akporo, bụ nefu ma dịkwa mfe iji. SuperVPN, ngwa VPN efu nke karịrị nde 100 nbudata na nyiwe gam akporo, bụ nnukwu mmemme enwere ike iji nweta saịtị nwere nkwarụ, ibudata na igwu egwuregwu na-adịghị maka nbudata na ụlọ...
Simulator ohi obodo bụ egwuregwu mkpanaka dị ka GTA nke ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji oge egwuregwu gị jupụta negwuregwu. Anyị na-agbalị iwu alaeze mpụ nke anyị na simulator City, egwuregwu emebere emebere ụwa nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ na ekwentị gị na mbadamba gị site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo....
Negwuregwu a, ị ga -agba akaebe ekweghị ekwe nke na -eme mgbe ị na -arụ ọrụ ugbo. Weghara ugbo gị na ubi ya. Na -akụ mkpụrụ nugbo, jiri ngwa aghasa mkpụrụ, na -agba ihe ubi mmiri nubi. Kwọga traktọ ka ọ were ihe ubi, chịkọta ma bufee ala. Iji rụọ ọrụ a niile, ị ga -aga ebe traktọ dị, maka nke a, ị ga -adọba ya na mpaghara dabara adaba...
Farmville 3 bụ egwuregwu ịme anwansị nefu nke ị nwere ike igwu na ekwentị gị nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo. Farmville, nke bụbu akụkọ egwuregwu ugbo, nọ ebe a na egwuregwu ọhụrụ nke usoro mgbe ogologo oge gachara. Ị nwere ike nwee nnukwu oge negwuregwu ahụ, nke pụtara ọhụhụ ọmarịcha agba ya, ikuku na -adọrọ adọrọ na sistemụ ndị mara...
Onyenwe nke Mgbaaka: Bilie na -alụ agha bụ egwuregwu ekwentị mkpanaaka na usoro nke Lord of Rings, nke Netease Games mepụtara. Download Onye nwe mgbaaka: bilie ịlụ agha Akụkọ ihe mere eme nke ndị mgbe ochie, ma ịhụnanya, enyi ma ọ bụ otuto, bụ ihe mgbe ochie. Agha ọhụrụ nke mgbanaka na-abịa, akara aka nke Middle-earth dị ugbu a naka gị....
Flightradar24, ngwa nsuso ụgbọ elu kacha ewu ewu nụwa; Ngwa njem #1 na mba 150. Tụgharịa ekwentị gam akporo gị ma ọ bụ mbadamba ihe gị ka ọ bụrụ onye na -eso ụzọ ụgbọ elu ma hụ ka ụgbọ elu gburugburu ụwa na -aga ozugbo na maapụ zuru ezu. Ma ọ bụ tụọ ngwaọrụ gị nụgbọ elu iji chọpụta ebe ọ na -aga na ụdị ụgbọ elu ọ bụ. Ị nwere ike pịa...
Ezigbo ụwa na -echere anyị na Super High School Bus Driving Simulator 3D, nke Games2win mepụtara. Na Super High School Bus Driving Simulator 3D, nke dị netiti egwuregwu ịgba ọsọ ekwentị, anyị ga -anakọta ndị egwuregwu site na nkwụsị wee nwaa ibuga ha nụlọ akwụkwọ ha. Mmepụta ahụ, nke gụnyere eserese 3D na ezigbo ụgbọ ala ụlọ akwụkwọ,...
PUBG: New State bụ ohuru ohuru royale maka ndị na-echere PUBG Mobile 2. Egwuregwu royale ahụ PUBG Mobile, nke mebiri ndekọ ndekọ na gam akporo na iOS mobile nyiwe, pụtara nokpuru aha PUBG New State kama PUBG Mobile 2. Ihe ọhụrụ PUBG mobile PUBG: Ọhụrụ State nwere ike ibudata nefu na ekwentị gam akporo na Google Play. Naka nke ọzọ, a...
Top iri na otu 2021, the award-winning football manager game. Site na ịmekọrịta otu ndị otu kpakpando iji wuo ama egwuregwu gị, ihe niile dị na Top Eleven dabere na iwu gị na klọb bụ ụlọ ọgbakọ gị! Ga-eche ihu football manager si nụwa nile na mobile online football manager egwuregwu na-egwuri ihe karịrị 250 nde egwuregwu. Na Top iri na...
Car Parking Multiplayer bụ otu egwuregwu egwuregwu kachasị ebudatara na Google Play. Ọ bụ ezie na aha egwuregwu ahụ bụ ebe a na-adọba ụgbọala, ọ bụ egwuregwu ụwa a na-emeghe, ya mere ọ na-atọ ụtọ karịa egwuregwu ụgbọ ala a na-ahụkarị. Ọ bụrụ negwuregwu ụgbọ ala na-amasị gị, ị kwesịrị ị budata ọtụtụ ndị na-adọba ụgbọala, nke na-enye ọnọdụ...
Crossfire: vlanahụ Zombie shooter bụ a zombie shooter egwuregwu nanị na gam akporo nelu ikpo okwu. Inye egwuregwu igwefoto nke mmadụ, RPG na MMO egwuregwu bụ ụdị kachasị mma nke ụdị eserese njikwa, njikwa mmiri na njikwa dị mma. Crossfire: vlanahụ Zombie shooter bụ free ibudata maka gam akporo igwe si Google Play! Download Crossfire:...
Granny 3 bụ otu egwuregwu egwu kachasị mma enwere ike igwu na PC na ngwaọrụ mkpanaka, egwuregwu nke atọ nime usoro ndị ama ama na-eme ka ọ pụta ìhè na ikpo okwu gam akporo. Ọ bụrụ na egwuregwu ndị na-atụ ụjọ-egwu na-amasị gị, anyị na-akwado Granny 3 ma ị gụrụ usoro ahụ ma ọ bụ na ị bughi. Granny 3 bụ nefu ibudata maka ekwentị gam akporo...
Site na ngwa Solo VPN, ị nwere ike jikọọ na ịntanetị nenweghị nsogbu site na ngwaọrụ gam akporo gị. Ọ bụ ezie na njikọ Wi-Fi ọha na eze yiri nnukwu ngọzi, enwere mpaghara anyị nwere ike ịkọwa dị ka onye na-akpa afọ ndị obi ọjọọ. Ọ nwere ike ịdị mkpa ịnweta enyemaka site na ngwa VPN dị mma iji chebe gị pụọ naka ndị a na -enweta ngwaọrụ...
NieR Reincarnation bụ egwuregwu eji eme ihe maka ngwaọrụ mkpanaka nke Square Enix na Applibot mepụtara. Budata nlọghachi azụ nke NieR Egwuregwu ọhụrụ na usoro NieR na -abịa na mkpanaka! Akụkọ a na -eme nebe akpọrọ Cage. Otu nwa agbọghọ tetara nụra nkume oyi. Ọ na -ahụ onwe ya nime oke ala nke jupụtara nogologo ụlọ nke ruru elu igwe....
RFS - Real Flight Simulator, ebe ị nwere ike fega nakụkụ ụwa dị iche iche wee rụọ ọrụ dị iche iche, bụ egwuregwu pụrụ iche netiti egwuregwu ịme anwansị nelu ikpo okwu mkpanaka. Ebumnuche nke egwuregwu a, nke na -enye ahụmịhe pụrụ iche nye ndị hụrụ egwuregwu nanya nwere ọmarịcha eserese ya na ihe nkiri ụgbọ elu nwere ezi uche, bụ ị nweta...
FOXplay bụ ụdị ikpo okwu ebe ị nwere ike ilele ihe nkiri na usoro na ịntanetị, ebe naanị ọdịnaya FOX TV ka agụnyere na agba nke mbụ ma eme atụmatụ ịhazi ọdịnaya ndị ọzọ nọdịnihu. Fox webatara ngwa ọhụrụ a dị ka ndị a: Ngwa Android anyị emeela ka ọ dị ọhụrụ! Site na ngwa emelitere anyị, ị nwere ike nweta usoro kachasị ewu ewu, ihe nkiri,...
WhatsApp Aero Hazar bụ ngwa WhatsApp nwere ntụkwasị obi enwere ike ibudata ma wụnye dị ka APK na ekwentị gam akporo (enweghị ụdị iOS). WhatsApp Aero Hazar ngwa adịghị mmekọ na Facebook, ọ bụ mod nke ndị ọzọ mepụtara. Ngwa WhatsApp na-ezighi ezi nwere ike ibute adịghị ike nchekwa. Mgbe ibudata ma jiri ya, ibu ọrụ bụ nke onye ọrụ,...
Alaeze: nkwa ọbara bụ ụwa kachasị obi ọjọọ imeghe otu egwuregwu MMORPG. Soro na ọbara a ma soro ndị egwuregwu si mba 150 lụọ ọgụ gburugburu ụwa! Download Alaeze: nkwa ọbara Alaeze: nkwa ọbara bụ maka ezigbo egwuregwu siri ike ma dabere na egwuregwu PC MMO PC. You nwere ike igbunye stat ihe mgbe ọ bụla na ata oghe ụwa, ịmụta ihe karịrị...
Facebook Messenger Lite (Ngwa) bụ ngwa izipu ozi ngwa ngwa maka mba ebe Facebook nwere njikọ badntanetị na-adịghị mma na ọkachasị ndị ọrụ na-eji ngwaọrụ mkpanaka ochie. Enwere m ike ịsị na ọ bụ obere ụdị nke ngwa Messenger nke na-enye ọrụ ndị bụ isi yana obere oriri data. Specialdị pụrụ iche nke ngwa izipu ozi Facebook Messenger, nke...
NightOwl VPN bụ ngwa ngwa, nchekwa, nkwụsi ike, ngwa VPN dị mfe maka ndị ọrụ ekwentị gam akporo. NightOwl VPN, nke nwere ọtụtụ puku ihe nkesa VPN gburugburu ụwa, na-abịa na bandwidth na-enweghị njedebe, ọsọ ọsọ ọsọ, ping dị ala na njikọta smart nke na-enye ahụmịcha vidiyo / egwu egwuregwu ka mma. Ọ na-edebe data ịntanetị gị na nchekwa...